" ဆိပ်ကမ်းမဝင်ခင် ကြိုပြင်ဆင် " စာအုပ်... ~ MSU Portal
" ဆိပ်ကမ်းမဝင်ခင် ကြိုပြင်ဆင် " စာအုပ်...
5/15/2013 03:55:00 PM Navi Kyaw No comments
ကိုကိုဦး (အင်ဂျင်နီယာမှုး) Mitsui OSK Lines ရေးသားသော " ဆိပ်ကမ်းမဝင်ခင် ကြိုပြင်ဆင် " ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။
ကို Jhon Tra Bolta မှ MSU FB Page တွင် မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted in: download links,knowledge,maritime books
" ကိုယ်ဝန်သည်သင်္ဘောသီး "
သင်္ဘောသား နဲ့ ကား ရင်း နှီး မြုပ်နှံ မှု... [ သင်္ဘေ...
သင်္ဘောပေါ်ရှိ သင်္ဘောသား ကိုယ်﻿ပိုင်﻿ Account ထဲ သို့ ...
Solar and Moon Calculator (for Android)
"Oil Fired Drum Type Water Tube Boiler နဲ့ Boiler ...
မာလင်အင်ဂလိဖော်စီးဖားရား study pack2စာအုပ်နှင့်a...
ဆိပ်ကမ်းတော်တော်များများရဲ့ဝိုင်ဖိုင် password မျာ...
အကောင်းဆုံး seamanship စာအုပ်နှင့်ဗီဒီယို
Colregs '72 Android app...
Nautical Almanac 2013 pdf နဲ့excel file...
မလာပါနဲ့... [ သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၁၃)... Seamen's ...
နိုင်ငံ တကာရေ ကြောင်း ကုန်သွယ်မှု ကျ ဆင်းနေခြင်းြေ...
ဟိုခေတ်... ဒီခေတ်... ညံ့သူ... တော်သူ... မြန်မာမို ...
National Workshop on Maritime Security Training 7~...
Introducing MSU @ facebook new cover photo with My...
တစ်ထောင့် တစ်ည ... [ သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၁၂)... S...
WWNWS ဆိုတဲ့ World-Wide Navigational Warning Servi...
"Oil-fired Drum Type Water Tube Boiler Steam Gener...
သီချင်းလေး နားထောင်ပြီး... စိတ်အမောတွေ ဖြေနိုင်ကြပ...
သင်္ဘာအရာရှိအချို့ လက်မှတ်အတုများဖြင့် လုပ်ကိုင်နေ.....
Real Vs. Fake... သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၁၀)... Seamen...
အလုပ်ရှား တယ်။ ဒါတွေကရော ဘယ်လိုရှင်းမလဲ... နှင့်...
စိန်ခေါ် မှု ကတော့ လာပြီ။... ACTION ဘာယူမှာ လဲ?
Anchoring ( Single Right Hand Propeller only)...
“Anti-fouling Paint Systems”
သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၈)... Seamen's Voice-8
ပင်လယ် နဲ့ ကောင်းကင်...
ဂျီပီအက် for mariner
MTM Maritime Centre ၏ အလုပ်ကြော်ငြာ
(၁၂-၅-၂၀၁၃) MSF သင်္ဘောသားကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးမှ ရရှိ...
National workshop on Maritime security training fo...
အများကြီးဝဲနေကြတယ်... ((( တွေးမိတွေး၇ာလေးများ(၂)....
သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၇)... Seamen's Voice-7
သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၆)... Seamen's Voice-6
Navigator များဆောင်ထားသင့်သော Celestial Navigator ...
MSFသင်္ဘောသားကိုယ်စားလှယ် ရွေးခြယ်တင်မြောက်ရေး အတွက်...
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော Cyclone Mahasen သ...
ဒရပ်ဆာဗေး A GUIDE TO GOOD PRACTICE
Tom Hanks သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Captain Phillips ရုပ်ရှ...
လူ့့ပြည် မှ နတ်ပြည်သို့ ...
အလုပ် ကထွက် ပြီး အိမ်ပြန် ချင်တယ် (၂)။
Chemical Tanker သင်္ဘောပေါ်မှာ အန္တရာယ် အရှိဆုံး opera...
ဝေလငါး ကလေး ရဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်။ (Essay)
လူမသိသော ကျွန်တော်တို့၏ ရေကြောင်းသိပံ္ပအကြောင်း...
သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၅)... Seamen's Voice-5
မြန်အောင်သင်္ဘောနှင့် တိုက်မိသည့် Malacca Highway ကာ...
အဝေးရောက်သင်္ဘောသားများ... Computer ပေါ်ကနေ Viber ခေါ်...
သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၄)... Seamen's Voice-4...
နိုင်ငံခြား ကုန်တင် သင်္ဘောတစ်စင်း ပါလီပါလဲ့ကျွန်း (...
Port State Control Inspection ( Video )...
Basic RADAR plotting (Video)...
Memory of “Siva Mumbai”
သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၃)... Seamen's Voice-3
BEARINGS အကြောင်း သိကောင်းစရာများ...
M.V.Malacca Highway နှင့်တိုက်မိသော မြန်အောင်သင်္ဘော...
သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၂)... Seamen's Voice (2)...
လှပတဲ့ တနင်္ဂနွေ .....။( ItsaBeautiful Day)
Change လုပ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် Die လုပ်မလား...